Ọ bụ afọ na-adọrọ mmasị maka ndị na-ere ahịa technologies ọtụtụ teknụzụ, ọganihu, na nyiwe iji chepụta, mepee ma tinye usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'oge ahụ, enwere m olile anya na ozi anyị nyere enyerela gị aka ilekwasị anya na metrik nke na-ebute nsonaazụ yana usoro nke kachasị eto azụmaahịa gị. Emepụtara infographic a na 2012 State of Social Media maka Companylọ Ọrụ SEO. Kwa ọnwa, ihe ọmụma ga-akpali ụfọdụ icheta mgbanwe na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụ ihe ọmụma na-atọ ụtọ nke ga-eme ka ị kwụsịtụ ma chee echiche banyere otu anyị ruteworo!